ရွာသားအသစ်ကလေးကို ဝင်ခွင့်ပြုပါနော် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » ရွာသားအသစ်ကလေးကို ဝင်ခွင့်ပြုပါနော်	33
ဘုဂလန့််ကောင် About Mr.ဝက်ကြီး
Mr.ဝက်ကြီး has written2post in this blog.
View all posts by Mr.ဝက်ကြီး →	Blog
မမ အညာသူ says: နာမည်ကြာရုံနှင့်တင် လန့်တန့်တန့်ဖြစ်သွားတယ်
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဘုဂလန့်ရှိုဒေါ့..အူးဘဇင်းဇောက်နဲ့ တွဲလို့ ရဘီ..
ဂိန်..ဂိန်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 909
နွေဦး says: ဘုဂလန့်အား ကန့်လန့်တိုက်ခွင့်ပြုစေ…..။
ဘုဂလန့်် says: မမညာသူရေ့
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘာလို့ ဂိန်တာလဲဆိုတော့ကာ
ခု .. ဂိန် .. ဂိန် .. ဖြစ်သွားဒါဘာ .. :D
Gipsy says: ဘုဂလန့်
htoosan says: သူကြီးက ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောစရာမလို အတွင်းဝင်ထိုင်ပြီး စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပြောလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါသည် ဆိုတော့ ဘေးထိုင်လေး ဖြုတ်လို့၇ပြီ… :grin:
ဘုဂလန့်် says: တိုတိုဂျစ်ပစီရေ့ ဘုပြောရတာတော့ဝါသနာပါတယ်ဗျ၊ ဘောပြုတာတော့ ကြိုက်ဘူးနော် ဟိဟိ
လတ်လတ် says: ဘုဂလန့်ကိုချစ်စနိုးနဲ. ဘုဘု လို.ခေါ်မယ်နော်…အာဟိ….။
ခင်ချင်ရို.ချတာ ချိတ်ချိုးရ၀ူးနော့…..။ :D
ဘုဂလန့်် says: အဲ့လာ ဘုဘုဟုတ်ဘူး ဘွတ်ဘွတ်
etone says: ဒီအရေးသား .. ဒီ နဲ့ …. ဒီလေသံကျပေါက်ကြည့်ရတာ ……. ဟိုဒင်းမှ ဟုတ်ရဲ့လား …….
ဘုဂလန့်် says: တားတားက နှစ်ကိုခွဲဟုတ်ဘူး
pan pan says: ဘူလေးလဲ…အဲ့လာ ဘူလေးလဲ
ရခိုင်လိုတော့ ပုပုပေ့ါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 48
ဘုဂလန့်် says: ဘုဘုဂဒေါ့ ပုဘာဘူးဗျာ
pan pan says: ပုပုဆိုတာ ကလေးလေးကို ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာလေ
အဲ့…ဘုဂလန့်တော့ ဘယ်လိုရယ်မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: ခင်မယ်နော်
Wow says: မစ်စတာအောင်ပုကို ကြိုက်တယ် ဆိုဒေါ့… သူဘာကြိုက်လဲ သိရဲ့မဟုတ်လား :D
နာကလွဲပြီး အားလုံးကို ဘုပြောဇေဗျား…. ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1718
မွန်မွန် says: နာတော့ ဘု ဆိုရင် မိုက်ကယ်ဘု ပဲ မြင်တယ်…
ဒီတော့ မတူအောင် လန့်လန့် လို့ ခေါ်မယ်နော်… လန့်လန့်ရဲ့ ဘုဂလန့် အရေးအသားတွေကို မကြာခင်မှာ တွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ (ဘိလပ်ပြန် မောင်သောင်းဖေ လေသံနှင့် ရေးသည်။) :P
amatmin says: ကျနော် သယ်ရင်းတယောက်နာမည်ကိုတော့
အင်း……ကိုပုဂန့်လန့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1740
Shwe Tike Soe says: ၀င်ခွင့်ကတော့ ပြုပါတယ် ဒါပေမယ့် ရွာ့လူကြီးတွေကို စည်ဘီယာဖောင် တင်ရပါတယ်…ဟီးဟီးဟီး :D
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: မှတ်ချက်။ ။ ဖောင်တင်ပြီးပါက ဖောင်ပြင်ခွင့်မစိ
Gipsy says: အရေးအသား လေယူလေသိမ်းကြည့်ရတာ
လတ်လတ် says: ဟေ့ဟေ့ လန်.လန်. နဲ. လတ်လတ် နဲ.မျက်စိရှမ်းပြီးမှားနေလို. ကွိုင်ရှော့တွေတက်ပြီး ဓါတ်လိုက်နေဦးမယ်…။
ဘုဂလန့်် says: ဝင်ခွင့်ပြု၍ အားပေးဂျဒဲ့ ရွာသူရွာသား အကြီးအသေး မရွေး ၊ အရင့်အနုမရွေး ၊ အားလုံးဂို ကျေးဇူးအားဂျီးတင်ဘာဒယ်နော်
thar ag says: ဘုကလန်လေး ကိုကြိုဆိုပါတယ်
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) says: အမလေး ၀င်ခွင့်တောင်းလို့ပဲ … အထဲတောင်ရောက်နေပီ …
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘုဂလန့်
ပြောရင်း သောက်ချင်လာပြီ (မှတ်ချက် ။ ။ ရေ …) :D
နို့ .. အနော့်ကို ခြောက်မျက်နှာလို့ ခေါ်မှန်းတောင် သိဒယ်နော့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1252
ဘဲဥ says: အရေးအသားကြည့်ရဒါ တညိုးဘဲနော်
မောင်ပေ says: ဘုဂလန့်ကောင်
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: နာမည်ကလည်း..ဘုဂလန့် ဆိုပါလား…
ဘုဂလန့်် says: နာမည်ကလည်း..ဘုဂလန့် ဆိုပါလား…
မောင်ပေ says: ဟုတ်ဒလယ်
ဘဲဥ says: တိုတိုပေတို့ အဲ့လိုပြောနဲ့လေ ပေါ်တင်ကြီး Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply